Yonwaytech - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
Indawo yokuThutha kunye neNtengiso yeSikhululo seenqwelomoya
Intengiso noRhwebo kunye nokuBuka iindwendwe kwiihotele
Iziganeko zeQonga leKonsathi yeQonga kunye neMiboniso ye-LED yeCawa
Ukusasazwa kwe Studio Studio kunye neZiko loLawulo loKhuseleko
Intengiso yangaphandle ye-LED yokubonisa kunye neBillboard
Ibala lezemidlalo Ibala lomdlalo ojikeleze umboniso we-LED
------ Yakho Ethembekileyo One-stop LED Bonisa yoMvelisi kunye kumazwe.
I-SHENZHEN YONWAYTECH CO., LTD yingcali ekhethekileyo kwi-LED DISPLAY kunye neempawu ze-LED kwizicelo ezahlukeneyo ezinje ngesiganeko somnyhadala, umboniso wobulungisa, izindlu nomhlaba, intengiso, ibhanki, umkhosi, indawo yezokhuseleko, isikhululo sikamabonwakude, ukubuk 'iindwendwe, iziko losasazo, ikonsathi, Icawa, izakhiwo, indawo yorhwebo, ibhanki, irestyu, imarike enkulu, isikhululo seenqwelomoya, njl.
Inkampani esekwe ngo-2015 kunye neqela elizinikeleyo kwimveliso yokubonisa ekhokelwayo ukusukela ngo-2006.
Ngomoya wentembeko, intlonipho, ukugqwesa kunye novelwano, iYonwaytech yakha kwaye igcina ukuthembana okunzulu kunye nabathengi bethu, abathengisi, kunye neqela lethu.
Ukukholelwa kuqhelaniso lwabathengi, uYonwaytech uhlala ezibandakanya ekunikezeleni ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu ngomsebenzi wethu.
Ngombulelo kubo bonke abathengi bethu kumazwekazi ama-6, siya kuhlala sikhula ngokuthe ngcembe ukukukhonza ngcono.
I-SHENZHEN YONWAYTECH CO., LTD njengomthengisi wehlabathi okhethekileyo kuyilo, ukwenziwa, kunye nenkonzo ye-LED DISPLAY kunye neempawu zedijithali.
Sinikezela ngezixazululo ze-SCREEN zesicelo sangaphakathi nangaphandle, kubandakanya ne-HD encinci ye-pixel pitch ekhokelwa siscreen, isibonisi esingaphakathi esibonisiweyo esikhokelwayo, inqanaba langaphakathi lokuqeshisa kwesikrini, ipowusta ekhokelwa ngentengiso, indawo engaqhelekanga ekhokelwe ukubonisa, isikwere esingaphandle esikhokelwe kwiscreen, isikrini sentsika ye-LED, Isibonisi esikhokeleyo esikhanyayo, umboniso okhokelayo obonakalayo, umboniso okhokelwa ngurhwebo, iteksi ekhokelwe kwiscreen, ishelf ekhokelwayo ekhombisa, umbala ongaphandle ogcweleyo okhokelweyo, umnyhadala ongaphandle wokuqeshisa ubungqina bamanzi Ibala lezemidlalo, i-LED, iperimeter ekhokelwayo kunye nezinye iziboniso ezikhokelwayo zeprojekthi eyenziwe ngokwezifiso.
Ngoncedo lothotho olupheleleyo loomatshini abaphambili kunye nezixhobo eziphucukileyo ezigubungela yonke inkqubo yokuvelisa kubandakanya i-R & D, ubunjineli, ukubumba kunye nokuvelisa, i-Yonwaytech iphumeza ngokungqongqo imigaqo ye-ISO9001 inkqubo yokujonga umgangatho wamazwe aphesheya ngomthamo wemveliso yeemitha zesikwere ezingama-3,000 zomboniso we-LED ngenyanga.
Ibhetshi nganye yeempahla iya kuvavanywa ngokungqongqo kuvavanyo lomoya, uvavanyo lokungcangcazela, uvavanyo oluphezulu kunye nolusezantsi lobushushu kunye neeyure ezingama-72 zokuguga kwemveliso ngaphambi kokuziswa.
Sinikezela nge-24/7 yenkonzo yokuthengisa kwangaphambili kunye nenkxaso yezobuchwephesha kumxhasi wethu, isindululo sobugcisa okanye uhlahlo-lwabiwo mali lweprojekthi olunokubonelelwa.
Iprojekthi eyenzelwe ngokukodwa ukuzoba okucwangcisiweyo kunye noyilo lokucingisisa kunye nomxhasi wethu ngexesha lenkonzo yokuthengisa.
Inkxaso yezobugcisa yasimahla kunye noqeqesho inokubonelelwa kumthengi wethu, iminyaka emi-2-5 iwaranti ngokuzikhethela ngokweemfuno zabaxumi.
Umboniso wethu okhokelwayo ulungele iimarike ezahlukeneyo ngezatifikethi ezifana ne-CE, EMC, UL, ETL, IECEE, SASO njl.
Ngamava atyebileyo kumzi mveliso wokubonisa we-LED, senza abathengi bafezekise ezona zisombululo zibalaseleyo ngomgangatho ophezulu wescreen kunye nexabiso elifanelekileyo
Indawo: Uluntu lwaseYutang, iSithili saseGuangming, iShenzhen, PR China
Intengiso yeMob: +86 138 2358 7729
(I-WhatsAPP kunye ne-Wechat ziyafumaneka)
Umnxeba: +86 755 2738 7166